Amabinzana angama-30 akhethiweyo malunga neenoveli | Uncwadi lwangoku
Amabinzana angama-30 akhethiweyo malunga neenoveli
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli
Ewe, ngu-Agasti, kodwa ngokuqinisekileyo baninzi ababhali ababetha isitshixo (okanye usiba kunye nencwadana yokubhalela) benenoveli abanayo engqondweni. Ewe kunikezelwe oku Ukukhethwa kwamabinzana angama-30 ngababhali abohlukeneyo kwinkcazo kunye nenkqubo ye- Bhala iinoveli.
Amabinzana angama-30 malunga neenoveli
Ukubhala inoveli kufana nokuhombisa umtya wokuhombisa ngemisonto enemibala emininzi: bubugcisa benkathalo kunye noqeqesho. Isabel Allende
Ukuqala ukubhala inoveli kufana nokuya kugqirha wamazinyo, kuba uzenzela uhlobo lwesamani. Mnumzana Kinsley Amis
Umsebenzi wenoveli kukwenza ukuba okungabonakaliyo kubonakale ngamazwi. UMiguel Angel Asturias
Inoveli ilungelelaniswe phakathi kwezinto ezimbalwa eziyinyani kunye nobuninzi bobuxoki obenza oko uninzi lwethu lubiza ngokuba bubomi. USawule uyakhwaza
Iinoveli azibhalwanga ngaphezulu kunalezo zingenakho ukuziphila. UAlejandro Casona
UmBhuda akanakuze abhale inoveli eyimpumelelo. Inkolo yakhe iyamyalela: "Musa ukuba nothando, ungathethi kakubi, sukucinga kakubi, sukujongeka kakubi." UWilliam Faulkner
Ukubhala inoveli kufana nokuhambahamba emhlabeni ujikelezwe ngabantu. UMaria Granata
Yonke into ahleliyo okanye uziva ngayo umbhali wenoveli iya kuphembelela umlilo ongonelisekiyo kwilizwe lakhe eliyintsomi. UCarmen Laforet
Abona bancwadi babalaseleyo, abona bantu babalaseleyo, babalulekile ngokubhekisele kulwazi lomntu abakukhuthazayo, nokwazisa ngamathuba obomi. R. uLeavis
Ngexesha uxwebhu malunga nexesha lethu kunye nengxelo yeengxaki zomntu wanamhlanje, inoveli kufuneka isenzakalise isazela soluntu ngomnqweno wokuphucula. UAna Maria Matute
Incwadana yinto yobugcisa bamaProtestanti; kuyimveliso yengqondo ekhululekileyo, yomntu ozimeleyo. George Orwell
Ndibhala iinoveli ukuphinda ndenze ubomi ngendlela yam. UArturo Pérez-Reverte
Ukuba uphatha abahlobo bakho kwinoveli yakho yokuqala, baya kukhubeka, kodwa ukuba akwenzi njalo, baya kuziva bengcatshiwe. UMordekayi Richler
Iinovelists ngabagcini-masango koncwadi. UMonstserrat Roig
Amava andifundisile ukuba akukho mimangaliso ibhaliweyo- ngumsebenzi onzima nje. Akunakwenzeka ukuba ubhale inoveli elungileyo ngonyawo lomvundla epokothweni yakho. UIsake Bashevis Imvumi
Umfundi unokuthathwa njengomlinganiswa ophambili kule noveli, ngokulinganayo kunye nombhali; ngaphandle kwayo, akukho nto yenziwe. UElsa triolet
Ndim inoveli. Ndim amabali am. UFrank kafka
Inoveli egqibeleleyo inokuguqula umfundi kude. UCarlos Fuentes
Ubomi bufana nenoveli rhoqo kunamanoveli afana nobomi. UGeorge Sand
Yonke inoveli bubungqina obunekhowudi; kukumelwa kwehlabathi, kodwa kwihlabathi apho umbhali wenoveli ongeze into: ingqumbo yakhe, umnqweno wakhe, ukugxeka kwakhe. UMario Vargas Llosa
Kum, ukubhala inoveli kukujongana neentaba ezinqabileyo kunye nokunyuka kweendonga zamatye kwaye, emva komzabalazo omde kunye nobushushu, ukufikelela encotsheni. Zigqithise okanye uphulukane: azikho ezinye iindlela onokukhetha kuzo. Nanini na xa ndibhala inoveli ende ndibhala loo mfanekiso engqondweni yam. UHaruki Murakami
Okwangoku abafundi abanalo ithuba lokundigweba kunye nenoveli yam kwinkundla eqatha ekhoyo, oko kukuthi, ezintliziyweni zabo nakwizazela zabo. Njengesiqhelo, yile nkundla endifuna ukuthethwa ngayo. UVasil Grossman
Yonke into kwinoveli yeyombhali kwaye ingumbhali. UCarlos Castilla del Pino
Ndizama ukwenza iinoveli ezenza ukuba abantu bangakhululeki ngokunxulumene noluntu lwethu oluthatha ngokungakhathali. UJohn irving
Ndibaluleke kakhulu kuyo yonke ingcinga yokuba inoveli ayisengomsebenzi wokuzonwabisa, indlela yokukhohlisa iiyure ezimbalwa, ezibandakanya ezentlalo, ezengqondo, ezembali, kodwa ekugqibeleni zifundwe. UEmilia Parto Bazán
Ukugqiba inoveli yinto ephawulekayo. Kuthatha ixesha elide ukubhala iziphelo, kokukhona ndihlupheka. Ukufezekisa ukuphela kwenoveli kunento yokubetha, kuba ukwazile ukuyenza. Ukuyigqiba kufana nokugxothwa ekhayeni lakho. Ndiyavuma ukuba elinye lawona maxesha amabi ebomini bam lusuku emva kokugqiba inoveli. UAlmudena Grandes
Kwiinoveli zam kukho yonke into ngamanye amaxesha andazanga ukuba ndiphile kanjani. Ezo zihlandlo zidlulileyo kwaye apho ndingathanda ukuthatha elinye inyathelo. Inoveli ikuvumela ukuba ugqibelele loo maxesha obomi owaphosileyo, ngokukhawuleza. Ezo zihlandlo apho ufuna amandla okwenza isigqibo kwangoko kwaye uthi, "Ewe, masenze," kwaye kuhlala kungenzeki. Incwadana ikuvumela ukuba ubuyele kwaye wenze ukhetho olufanelekileyo. UFederico Moccia
Ndizama ukuba iinoveli zam ziyimisebenzi yobugcisa, njengombongo omkhulu, umzobo olungileyo okanye imovie elungileyo inokuba njalo. Andinamdla kwezopolitiko okanye kwezokuziphatha. Into endiyifunayo kukwenza into entle ndiyibeke emhlabeni. UJohn banville
Ndicinga ukuba yonke inoveli, ekugqibeleni, ngumzamo wokubambisa umhlaba wonke encwadini, nokuba ngaba "lihlabathi liphela" uthetha isiqwenga nje, ikona, into encinci eyenzeka ngomzuzwana. ULaura Restrepo
Iinoveli aziqali njengoko umntu efuna, kodwa njengoko zifuna. UGabriel García Márquez
Umthombo: Inkulungwane yokuthandana. UJosé María Albaigès Olivart kunye noM. Dolors Hipólito. Umhlaba
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Amabinzana angama-30 akhethiweyo malunga neenoveli